Varotra Apple Q2, fanomezana Apple ho an'i Chine, maody maizina amin'ny fampiharana antoko fahatelo, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac | Avy amin'ny mac aho
Jordi Gimenez | | About us, Solosaina Mac
Amin'ny Alahady isika ary ity herinandro ity dia sahirana kely noho ny teo aloha satria tsy mbola nanana kinova beta an'ny rafitra fiasan'i Apple izahay ary ny marina dia ny hafanan'ny Jolay rehefa eo afovoany isika no tsy dia mahery. Tamin'ity herinandro ity isika dia nahita antsipiriany mahaliana momba ny orinasan'ny paoma manaikitra, nefa tsy isalasalana fa ny vaovao miavaka dia ny fahatongavan'ilay lalao ho an'ny fitaovana iOS sy Android Pokémon Go. Raha mbola tsy nahita na inona na inona momba izany ianao dia tao anaty lava-bato iray ianao satria mandritra ity herinandro ity ny Pokémon dia ao anaty lasopy mihitsy.
Saingy manohy manao ny zavatra ataonay izahay ary mandeha amin'ny famerenana ireo zava-nisongadina tamin'ity herinandro ity mikasika ny Apple sy Mac. Ny vaovao voalohany dia ny sora-tanana video WWDC 2016 dia misy izao ho an'ireo mpampiasa rehetra te-hahita azy ireo.
Ity vaovao manaraka ity dia mifandraika mivantana amin'ny fivarotana solosaina Mac sy ny azy ireo milatsaka avy amin'ny laharana faha-4 ka hatramin'ny faha-5 amin'ny laharana. Apple dia laharana faha-5 amin'ny fandefasana solosaina mandritra ny Q2 2016 ary andao hanantena izy ireo fa hahazo ny bateria amin'ny Mac amin'ity taona ity
Etsy ankilany tena hitantsika ny fahalianan'i Apple amin'ireo olana any Shina sy amin'ity tranga ity ny orinasa amerikana dia manome 1.000.000 $ hanampy ny firenena amin'ny tondra-drano lehibe. Hatramin'ny niasan'i Tim Cook ny orinasa matetika ireo fanampiana ireo amin'ny firenena voina voajanahary.
Navoaka tao amin'ny macOS Sierra beta izay ananan'ity rafitra ity izy fomba maizina mifanaraka amin'ny fampiharana antoko fahatelo. Hitanay ny fampahalalana rehetra momba ity "Mode maizina" ity ho an'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo ny talata lasa teo.
Farany dia misy tsaho milaza fa ho liana amin'izany i Apple fividianana F1. Tsaho momba ny fividianana izany fandefasana an'ity fanatanjahantena ity amin'ny Apple TV no mamarana ny famintinana ny Alahady anio. Afaka manomboka ny lalao Pokémon Go indray ianao eny an-dalambe ao an-tanànanao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Varotra Apple Q2, fanomezana Apple ho an'i Chine, maody maizina amin'ny fampiharana antoko fahatelo, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac